မျှော်လင့် နေဆဲဘဲ: မြန်မာဆိုရင်မရိုင်းပါနဲ့ ကိုညွန့် လွင်
တခြားလူတွေကို မရှင်းဘဲ ဌေးနိူင်ကိုမှ ရွှေးပီးရှင်းတယ်ဆိုတာ အကြောင်း ရှိပါလိမ့်မယ်။
ပြသာနာက ဌေးနိူင်က ၁၉၈၈တုံးက နောက်ဆုံးနှစ်သချာ် ကျောင်းသာ
ပဏာန လက်ရွေးစင် ဘော်လီဘောသမား ။
ကျုပ်လဲအခုမှ ဂဂနနသိတာ။၀ိုင်းပြီး တလှည့်စီရိုက်ခဲ့တာအုပ်စုလိုက်ဘဲ။
နံပါတ် ၁၂၇ မှာရှိတယ်။
ကျုပ်ကသူ့ အကို အရင်းဘဲ။
Date: Fri, 19 Feb 2010 22:28:30 +0600
Subject: Re: [8888peoplepower] ကိုဌေးန
ကျုပ်ဟာ မိုးသီးရဲ့ လူလည်း မဟုတ်ဘူးဗျ၊
ဒါပေမယ့် ပြောစရာရှ်ိတာကိုတော့ ပြောရမှာဘဲ။ ခင်ဗျားကို အေဘီက ရှင်းခဲ့လား။
တခြား လူတွေကို ကောရှင်းခဲ့လား။
သေသေချာချာ မသိဘဲနဲ့ လျှောက်ပြောမနေနဲ့။ ဗိုလ်ချုပ်လည်း ထန်းတပင်မှာ ရှင်းခဲ့တာဘဲ။
သခင်သန်းထွန်းလည်း ၅၁ နဲ့ရှင်းခဲ့တာဘဲ။ ခင်ဗျား လက်နက်ကိုင်ခဲ့တဲ့ အေဘီ အစစ်လား။
လက်နက်ကိုင်တယ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် သစ္စာဖေါက်ကို ဘယ်လို လုပ်ရတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျား သိပါလိမ့်မယ်။
ဒီပြဿနာမှာ အရေးကြီးဆုံးက ဌေးနိုင်ဟာ ထောက်လှမ်းရေး ဟုတ်မဟုတ် အရေးကြီးဆုံးဘဲ။
ထောက်လှမ်းရေးဆိုရင် ရှင်းတာ လီးဖြစ်လား။
2010/2/18 shwe htee
[Attachment(s) from shwe htee included below]
I am very kindly to request you, pleases giveagood reason to Htay Naing’s family why you made the decision to killed Htay Naing. If you are still quiet like that is not look good for you at all. At least, you must explain, Than Win accused you murdered Htay Naing.
I think that you won’t beastudent leader orapolitical leader in the future in Burma if you don’t explain why you made that decision to killed Htay Naing. His family members are waiting for your explanation.
Come on duce… beaman….
Shwe Htee (8888)
I saw lots of blood in 1988
I saw lots of people got kill in 1988
I saw lots of families got separated in 1988…including me.
I saw lots of blood on the Burma-Thai border for good cause, bad cause, and DIRTY CAUSE.
Posted by Mr Htay Tint at 9:43 AM
Labels: ၁၉ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀၁၀